IMFUNDO YOKHOKELO LWEBOXGIRLS | Boxgirls South Africa IMFUNDO YOKHOKELO LWEBOXGIRLS – Boxgirls South Africa
iBoxgirls “Girls Afterschool Leadership Education” yinkqubo entsha emiselwe amantombazane aselula afunda ezikolweni zamabanga aphantsi baseKhayelitsha. Isiqubulo sethu “Strong Girls. Safe Communities.” Sisebenzela phezu kwenqanaba lokuba amantombazane namanina abenezakhono nenkxaso yokuziphuhlisa, bathathe namanyathelo okuzikhusela nokusebenzela imiphakathi yabo ikhuseleke. Kungako imibono negalelo lenkqubo yethu ifikelela kwintombazana nganye, iqhubekele kontanga bakhe nomphakathi wonke uphela. Ukuphumulela kulemibono inegalelo kuso nesikolo, amantombazana athatha inkxaxheba bazodlala indima yokwandisa ukulwa kobudlobongela olubhekiswe kumanina namantombazana.
IPeer Facilitators ezingamanina ziqeqesha iqela elingamashumi amathathu (30) lamantombazana afunda kugrade 5, indlela zokuphila ebunzimeni, izakhono zonxulumano, izakhono zokuphila kunye nendlela elungileyo yolufunda kwithuba elingange siqingatha enyakeni wesikolo. iPeer Facilitators ngamanina aselula abanonyaniseko olukhulu abaphuma kumphakathi, baqeqeshwe kwaye baphethwe sithi.
Uluhlu lwenkqubo buquka izihloko ezifana:
Izakhono zonxulumano (ukumamelana, ukukhombisa, uthetha thethwano kunye nothwebulo lwemibukiso)
Ukuzihlonipha nobeko imiqathango
indlela zokuphila ebunzimeni
ubumbano namanye amantombazana, noqononondisa amalungelo amantombazana
ulwazi inkalo zasekuhlaleni kwaye namathuba
Lamantombazana ahamba iBoxgirls Afterschol Leadership Club kabini evekini kwixesha elingangesiqingatha enyakeni wesikolo imizuzu engamashumi ethoba emva kwesikolo. Inkqubo iquka noncedo ngomsebenzi wesikolo wasekhaya kwaye nolungiselelo lwemviwo kwiHomework Club.
Siqhuba inkqubo yethu kwizikolo ezinambanga asenzantsi ezihlanu (5) eKhayeliths, Site C, kwaye ne Math Hub for Homework Club.
Funda kabanzi ngelokishi zeBoxgirls South Africa
Ukusukela ngoNovember 2015 sizokwandisa iproject kwizikolo ezingamashumi anesihlanu (15) ngaphezulu kwaye eMaths Hub ezimbini (2) zeHomework Club. Ngo April 2017 iBoxfgirls Afterschool Leadership Club iza kufikelela cishe 90% yesikolo zonke zambanga asezantsi zaseKhayelitsha.
iBoxgirls South Africa iqhuba inkqubo zayo kwilokishi ezingathathi ntweni ezingrhanqe iKapa .
Sinikela amantombazaneni ethu ” Afterschool Leadership Club” ezikolweni ezilandelayo eKhayelitsha
Ngo 2016 sizokwandisela inkqubo yethu ezikolweni ezi15